Tuesday February 25, 2020 - 18:09:26 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Masar ayaa iclaamisay in Mubaarak uu geeriyooday isagoo 91 sana jir ah, ninkan halaagsamay ayaa xukunkiisi lagu riday kacdoonkii shacbiga ahaa ee dhacay sanaddii 2011.
Wuxuu ahaa hoggaamiye taariikh madoow leh isagoo gacan saar wanaagsan lalahaa Yahuudda iyo Nasaarada, waxaa lagu tiriyaa mid kamida hoggaamiyaashii ugu xumaa ee soo maray caalamka Islaamka.
Max'med Xusni Mubaarak oo ayaa ku dhashay gobolka Almanoofiya ee waqooyiga magaalada Al Qaahira sanaddii 1928.
Sanaddii 1948 wuxuu ka qalin jebiyay dugsiga sare wuxuuna ku biiray kuliyadda dagaalka isagoo markii dambe ka qaatay shahaadada ciidanimo.
wuxuu ahaa siyaasi dabadhilif calmaani ah oo ay aad isugu dhowaayeen Jamaal Cabdi Naasir iyo Anwar Saadaad oo labaduba mar soo maamulay wadanka Masar kaalin weyna ku lahaa in Yahuudda loo gacan geliyo dhulka Falasdiin.
Mubaarak ayaa gacan ka geystay heshiiskii loogu magac daray Camp David ee Yahuudda lagu siiyay ammaan buuxa, markii dilka lagu fuliyay Anwar Saadaad sanaddii 1981 ayuu Mubaarak majaraha uqabtay dowladda Melleteriga Masar.
Max'med Xusni Mubaarak wuxuu ahaa shakhsi Yahuudda u adeega aadna ula dagaallamay dadka muslimiinta ah gaar ahaan culimada iyo dhalinyarada diinkooda ku dheggan, wuxuu la dagaallamay shacaa'irta Islaamka isagoona xuriyad buuxda siiyay gaallada aqaliyaadka ku ah Masar.